Ndị na-emepụta ikuku ikuku - China Air Ijikwa Units Factory & Suppliers
Ejiri maka ọgwụgwọ ikuku nke ime ụlọ. Industrial Heat Recovery Air Ijikwa Unit bụ nnukwu na-ajụ-sized ntụ oyi akụrụngwa na ọrụ nke friji, kpo oku, mgbe nile okpomọkụ na iru mmiri, ventilashion, ikuku ọcha na okpomọkụ mgbake. Njirimara ： Ngwaahịa a na - ejikọta igbe ikuku ikuku jikọtara ọnụ na teknụzụ ikuku ikuku na-agbasawanye, nke nwere ike ịghọta njikwa njikwa nke friji na ntụ oyi. Ọ nwere usoro dị mfe, stabl ...
Jikọtara na isi technology nke HOLTOP AHU, DX (Direct Mgbasawanye) eriri igwe AHU nye ma AHU na n'èzí condensing unit. Ọ bụ ihe ngwọta na-agbanwe agbanwe ma dị mfe maka mpaghara ụlọ niile, dị ka nnukwu ụlọ ahịa, ọfịs, sinima, ụlọ akwụkwọ wdg. Mgbasawanye ọkụ (DX) ọkụ ọkụ na nhicha ikuku ikuku bụ ikuku ọgwụgwọ ikuku nke na-eji ikuku dị ka isi iyi nke oyi na okpomọkụ , ma obu ihe ndi ozo nke juputara na oyi na oku. Ọ mejupụtara n'èzí ikuku-mma mkpakọ condensing ngalaba ...
Igwe ikuku na ikuku na ikuku ikuku mgbake, arụmọrụ mgbake dị elu karịa 60%.
Industrial AHU na-akpan mere maka oge a na ụlọ ọrụ mmepụta ihe, dị ka Automotive, Electronic, Spaceflight, Pharmaceutical wdg Holtop na-enye ihe ngwọta aka ime ụlọ ikuku okpomọkụ, iru mmiri, ịdị ọcha, ọhụrụ ikuku, VOCs wdg